Champ League Archive - Gool FM - page 3	twitter
Athletic Bilbao oo ku camiratay PSG kadib guul daradii ka soo gaartay Barcelona
(Bilabo) 09 Maarso 2017 Kooxda Athletic Bilbao ayaa ku camiratay dhigeeda PSG kadib guul daradii 6-1 ee xalay ka soo gaartay koobka horyaalada yurub.
Bilbao ayaa dib u milicsatay Final-ka Super Cup-ka Spain ee sanadkii 2015, markaas oo lugtii hore ay uga soo adkaadeen Barcelona 4-0.
Lugtii labaad oo lagu ciyaaray garoonka Camp Nou ayaana ku soo idlaatay 1-1, taas oo ka dhigtay Athletic Bilbao inay ku guulaysatay koobka.
Waxaana xalay lagu soo qoray Barta Twitter-ka ee kooxda Athletic Bilbao: “Uma malaynayn inay sidaan u adagtahay in 
“Waxay doonayeen inay na duugaan” – Gerard Pique
(Barcelona) 09 Maarso 2017 Daafaca kooxda Barcelona ee Gerard Pique ayaa ka hadlay farxadiisa ku aadan in kooxdiisu ay si taariikhi ah ugu soo baxdo wareega 8-da.
Barcelona ayaa ka soo laabatay guul daro 4-0 ah iyaga oo 6-1 uga adkaaday kooxda PSG oo marti ugu ahayd garoonka Camp Nou xalay.
Gerard Pique ayaa sheegay in dadka badankiis ay doonayeen inay duugaan Barcelona balse iyagu ay soo muujiyeen inay noolaan karaan.
“Dadka badankiis waxay doonayeen inay naduugaan laakiin waxaan tusnay inaan wali noolaan karno oo 
Laakiin isma dhigan wiilasha reer Catalonia oo daqiiqadihii dambe ayay dhaliyeen saddexda gool iyadoo goolka 
Wenger oo masuuliyada guul daradii xalay dusha ka saaray garsoorihii ciyaarta
(London) 08 Maarso 2017 Tababaraha kooxda Arsenal ee Arsene Wenger ayaa weerar toos ah ku qaaday garsoorihii dhex dhexaadiyay kulankii xalay 5-1 looga adkaaday kooxdiisa.
Bayern Munich ayaa cashar lama ilaawaan ah u dhigtay kooxda Arsenal oo labadii lug ee wareega 16-ka uga soo adkaatay 10-2.
Garsooraha ayaa lagu eedeeyay inuu iska indho tiray gool kulaad ay ahayd inuu u dhigo Arsenal xili xerada ganaaxa lagu jilaafay Theo Walcott.
Taa badalkeeda wuxuu casaan siiyay Laurent Koscielny isaga oo gool ku laad ka dhigay kooxda Arsenal 
WARBIXIN: 3-Waxyaabood oo ay Barcelona caawa uga soo kaban karto guul daradii 4-0 ee PSG
(Europe) 08 Mar 2017. Haddaan fiirino kulanka Champions Leage oo ay caawa Barcelona lugta 2aad ee wareega 16-ka kula yeelaneyso kooxda PSG qalad noqon meyso haddii la yiraahdo dadka daawada kubada cagta badankood ma aaminsana in kooxda reer Catalonia ay rajo badan ka leedahay inay kasoo laabato guul daradii 4-0.
Inkasta oo ay tahay shaqo aan fududeyn, haddana waa macquul in Barca ay dhanka kale u rogto natiijadii hore.
Haddii dib loogu laabto 2004, kadib markii kooxda Deportivo looga adkaaday 4-1 lugtii 
(London) 07 Maarso 2017 Taageerayaasha kooxda Arsenal ayaa haatan banaan bax kawada banaanka garoonka Emirates xili daqiiqado oo kaliya ay ka harsantahay ciyaarta Bayern Munich.
Kumanaan kun oo taageerayaasha kooxda Arsenal ah ayaa dalbanaya in tababare Arsene Wenger uu isaga tago kooxda dhamaadka xiliciyaareed kan.
Waxayna ka soo horjeesteen in heshiis cusub laga saxiixo Arsene Wenger kadib markii maamulku uu soo hordhigay heshiis 2-sano ah.
“Waxaan doonaynaa in Arsenal ay dib u soo laabato, Maya heshiis cusub, waxaan doonaynaa in Wenger uu baxo” ayeey 
Taageerayaasha Napoli oo sabab u noqday in Real Madrid aysan tababar qaadan saaka
(Napoli) 07 Maarso 2017 Ciyaartoyda Real Madrid oo haatan ku sugan koofurta talyaaniga ayaa la soo sheegayaa inaysan wax tababar ah qaadan saaka.
Tababare Zidane oo aad u garanaya talyaaniga ayaa saaka hakad galiyay tababarkii u qorshaysnaa kooxda maadama kooxdu ay dagtay Hotel 11 kiiloMitir u jira garoonka sida ay baahisay Corriere dello Sport.
Zidane ayaa ka cabsaday in taageerayaasha Napoli ay ku soo xoomaan baska kooxda taas oo ay ka dhalan karto fowdo iyo in la waxyeeleeyo ciyaartoyda Real Madrid.
Tababaraha reer France 
“Uma ogolaanayno Real Madrid inay nastaan” – Tababare Maurizio Sarri
(Napoli) 07 Maarso 2017 Tababaraha kooxda Napoli ee Maurizio Sarri ayaa ka hadlay kulanka lugta labaad ee kooxdiisu ay caawa marti galin doonto dhigeeda Real Madrid.
Real Madrid ayaa 3-1 ku soo adkaatay kulankii lugta hore, waxayna caawa indhaha ku haayaan sidii ay ugu soo gudbi lahaayeen wareega 8-da.
Maurizio Sarri ayaa sheegay in cadaadisku uu saaranyahay Real Madrid maadama ay tahay kooxda ugu hodansan aduunka.
“Cadaadisku iyaga ayuu saaranyahay waayo waa kooxda ugu hodansan isla markaana ah horyaalka aduunka” ayuu yiri Maurizio Sarri.
“Laakiin anagu waxaan 
(Munich) 07 Maarso 2017 Tababaraha kooxda Bayern Munich Carlo Ancelotti ayaa amaanay dhigiisa kooxda Arsenal ee Arsene Wenger ka hor kulankooda caawa.
Bayern Munich ayaa caawa u martin doonta Arsenal xili ay 5-1 uga soo adkaatay kulankii lugta hore, waxayna u muuqdaan koox u soo gudubtay wareega xiga.
Laakiin Ancelotti ayaa ka soo horjeestay in la eedeeyo tababare Wenger kadib guul darooyinkii is xigxigay ee ka soo kala gaaray Bayern Munich iyo Liverpool.
“Waa inaan la qabsanaa eedeymaha (haddii aan nahay tababareyaal), waan hubaa 